Covid-19 Medical Inoshandiswa isina-yakarukwa nhevedzano Vagadziri & Vatengesi - China Covid-19 Medical Inoshandiswa isiri-yakarukwa dzakateedzana Fekitori
Molecular Biology inoshandiswa
Centrifuge chubhu Zvigadzirwa
General Lab Mapurasitiki
Covid-19 Medical Consumable magurovhosi
Covid-19 Medical Inoshandiswa isiri-yakarukwa nhevedzano
Cell uye Tissue Tsika Plates
kuraswa asiri-rakarukwa nguwani
HUPENYU hunoraswa makapeti anogadzirwa mu100,000 giredhi yakachena mukamuri nharaunda, maitiro neprimiyamu zvinhu. Tisati taendesa kune vatengi vedu, zvigadzirwa zvese zvinowanikwa neyakaomarara QC maitiro akasimbiswa ne ISO 9001, ISO13485 mhando manejimendi manejimendi system, kuvimbisa yemhando yepamusoro. LIFAN inopa yakazara OEM mhinduro dzekurasa kuraswa kweakasiyana mashandisiro. Makapeti edu anogadzirwa kune akaomesesa maratidziro pasi peyakaomarara maitiro ekudzora uye akaunganidzwa nemagetsi kuti ave nechokwadi chekuita pamwe nehunhu.
machira ebhutsu anoraswa
HUPENYU hunoraswa bhutsu mabutiro anogadzirwa mu100,000 giredhi yakachena mukamuri nharaunda, maitiro neprimiyamu zvinhu. Tisati taendesa kune vatengi vedu, zvigadzirwa zvese zvinowanikwa neyakaomarara QC maitiro akasimbiswa ne ISO 9001, ISO13485 mhando manejimendi manejimendi system, kuvimbisa yemhando yepamusoro. LIFAN inopa yakazara OEM mhinduro dzekurasa shangu zvifukidzo zvekushandisa kwakasiyana. Yedu yeshangu yekuvhara inogadzirwa kune inoomesesa maratidziro pasi peyakaomarara maitiro ekudzora uye akaunganidzwa kuburikidza neotomation kuona isingachinjike mashandiro uye mhando.
HUPENYU magasi anoraswa anogadzirwa mu100,000 giredhi yakachena mukamuri nharaunda, mashandiro ane premium zvinhu. Tisati taendesa kune vatengi vedu, zvigadzirwa zvese zvinowanikwa neyakaomarara QC maitiro akasimbiswa ne ISO 9001, ISO13485 mhando manejimendi manejimendi system, kuvimbisa yemhando yepamusoro. LIFAN inopa yakazara OEM mhinduro dzeanoraswa majasi ekushandisa kwakasiyana. MaGown edu anogadzirwa kune akaomesesa maratidziro pasi peyakaomarara maitiro ekudzora uye akaunganidzwa nemagetsi kuti ave nechokwadi chekuita pamwe nehunhu.